E Nyefere Jehova Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Sri Lanka
ỤMỤNNA anyị ndị Sri Lanka yiiri uwe ọdịnala ha ma jiri obi ụtọ nabata otu narị ụmụnna na iri atọ si mba iri na itoolu bịa maka inyefe Jehova alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Sri Lanka. Ụmụaka bụrụ abụ Alaeze anyị. Mmadụ niile kirikwara ihe dị iche iche e ji gosi omenala na ọdịnala ndị Sri Lanka, rie nri ha a kwọrọ aka sie, nụrụ egwú ha ma soro ụmụnna ha kpakọrịta. Obi tọrọ onye ọ bụla ụtọ.
Ọ bụ na Satọdee, Jenụwarị 11, 2014, ka e nyefere Jehova ụlọ ọhụrụ ndị a rụrụ na ndị nke a rụzigharịrị arụzigharị n’alaka ụlọ ọrụ ahụ. Narị mmadụ asatọ na iri itoolu na atọ gere ntị n’ihe omume ahụ n’asụsụ atọ. Ha niile ji obi ụtọ kụọ aka mgbe Nwanna Mark Sanderson, onye so n’Òtù Na-achị Isi, jụrụ ha, sị: “Ùnu ga-achọ inyefe Jehova Chineke ụlọ ọhụrụ ndị a?”
N’echi ya, puku mmadụ asaa na narị asaa na otu gere ntị n’ihe omume e ji kọwaara ha ihe niile e mere mgbe e nyefere Jehova alaka ụlọ ọrụ ahụ, geekwa okwu ọzọ tọrọ ụtọ Nwanna Sanderson kwuru. Ụmụnna anyị ndị zukọrọ n’ebe ise dị iche iche ná mba ahụ nọkwa na-ekiri ihe omume ahụ ma na-anụ ihe a na-ekwu. Ihe a bụ nke mbụ a na-eme ka ụmụnna anyị ndị nọ n’ebe dị iche iche ná mba ahụ nwee ike ịna-ahụ ibe ha n’otu oge, nụkọọ Okwu Chineke ma bụkọọ abụ ọnụ. A gaghị echefu nnọkọ a echefu n’ihi na, n’eziokwu, o mere ka ụmụnna anyị “ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu.”—Nehe. 12:43.
Gịnị Ka A Na-eme n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova?
A na-akpọgharị onye ọ bụla chọrọ ịhụ ihe a na-eme n’alaka ụlọ ọrụ anyị. Anyị ga-anabata gị ma ị bịa.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Dị na Sri Lanka
Ndị ọbịa nwere ike ịga legharịa anya, a gaghịkwa ana ha ego.
mailto:?body=E Nyefere Jehova Alaka Ụlọ Ọrụ Anyị Dị na Sri Lanka%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015056%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=E Nyefere Jehova Alaka Ụlọ Ọrụ Anyị Dị na Sri Lanka
mailto:?body=Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2015%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dyb15%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2015